Dagaal ka dhacay Baled-xaawo & ciidamada Itoobiya oo kala dhexgalay labada dhinac – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dagaal ka dhacay Baled-xaawo & ciidamada Itoobiya oo kala dhexgalay labada dhinac
Baled-xaawo – Mareeg.com: Dagaal u dhaxeeya ciidamo taageersan maamulka Juba ee Axmed Madoobe hogaamiyo iyo ciidamo ka amar-qaata maamulka dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa maanta ka dhacay degmada Baled-xaawo ee gobolka Gedo.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tegay degmada Doolow ee isla gobolka Gedo ay gaareen degmada Baled-xaawo. Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay dhowr qof oo isugu jira askar iyo shacab.
Gudoomiyaha gobolka Gedo, Maxamed Cabdi Kaliil oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamo lagu tababaray degmada Doolow ay weerar ku qaadeen degmada Baled-xaawo oo ay maamulaan ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Gedo ee dowladda.
Maxamed Cabdi Kaliil ayaa sheegay inuusan aqoonsaneyn maamulka KMG ah ee Juba, islamarkaana aysan Jabhadda Raas-kambooni ka tlin doonin gobolka Gedo.
Kaliil ayaa sidoo kale xusay in dhibaatadii ka taagneyd Kismaayo loo raray degmada Baled-xaawo oo aheyd meel ilaa xad degan.
Dhanka kale, waxaa warbaahinta la hadlay C/rashiid Xasan Nuur (Janan) oo ah wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga maamulka Juba, kaasoo ku sugan degmada Doolow oo ay ka baxeen ciidamada sababay in dagaal ka dhaco Baled-xaawo.
C/rashiid Xasan Nuur (Janan) ayaa sheegay in dagaalka ka dhacay Baled-xaawo uu u dhaxeeyey ciidamo deegaanka ka wada tirsanaa, wuxuuna dhankiisa diiday inuu Maxamed Cabdi Kaliil u aqoonsan yahay gudoomiyaha gobolka Gedo.
C/rashiid Janan ayaa sheegay in ilaa 5 qof ay ku dhinteen dagaalkii maanta ka dhacay degmada Baled-xaawo, wuxuuna xusay inuu isagu doonayo in gobolka Gedo oo dhan la hoos geeyo maamulka KMG ah ee JUBA, kaasoo uu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo dalalka derisku aqoonsan yihiin. C/rashiid Janan ayaa xusay inuu ka xunyahay dagaalka ka dhacay Baled-xaawo.
Maxamed Cabdi Kaliil iyo C/rashiid Xasan Nuur (Janan) ayaa labaduba sheegay in ciidamada dowladda Itoobiya ay kala dhexgaleen labada dhinac ee ku dagaalamay degmada Baled-xaawo.
Labadan mas’uul ee isku gobolka kazoo wada jeeda ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu adeegayo danaha Alshabaab oo weli ka dagaallama qeybo ka mid ah gobolkaas.
Dadka kazoo jeeda gobolka Gedo ayaa ah kuwa kala qeybsan, waxaana qaar ka mid ah la safan yihiin maamulka Axmed Madoobe, halka qaar kale aysan marna arki Karin Axmed Madoobe iyo maamulkiisa, taas ayaana keentay iney dhexdooda ka dagaallamaan.
← Gudoomiyihii degmada Yaakhshiid Muxudiin Jurrus oo xilka laga qaaday → Xildhibaano ka badan 100 oo madaxweyne Xasan Sheekh ugu baaqay inuu is casilo (Sabab?)